Umhla My Pet » 5 Izinto Ofanele yokuthetha On A Umhla First
ukubuyekezwa: Jan. 19 2021 | 2 min ukufunda
Umhla wokuqala kunokuba kwisahluko sokuqala ngumntu wasentsomini, kodwa kwakhona ukuba ububi ngenxa nje wena yachukumisa ngomxholo "untouchable". uthando Ukufumana kubonakala lula njalo bhanya, kodwa ngaba efanayo ebomini? Romance ayisoloko ukubhabha kakuhle, kunye nokufumana iqabane umphefumlo wakho lula ukuba ngamnye kuthi. Ngamanye amaxesha oko ngumbuzo ukwazi ukulwa njani kuba, enokuthintelwa ngayo ukwenza pas seFaux, ingakumbi ngomhla wakho kuqala. Nangona eli lixesha xa uzama ukufumanisa izinto ezisisiseko ezintsha esizifumanisayo, kungcono unamathele izihloko incoko ekhuselekileyo. Nazi ezinye izinto ekufuneka yokuthetha kwakho ngomhla wokuqala:
Akukho mntu uthi izimvo zakho kwezopolitiko ayibalulekanga, kodwa ngokuqinisekileyo musani ukwenza incoko isihloko ekhuselekileyo ngomhla wokuqala. Ukuzisa yezobupolitika abadalele nje moya wentiyo, kwaye le nto ufuna. Ngenye indlela, akuyi wenze yiriphabliki babe zedemokhrasi okanye ngokugqwethekileyo ... okungenani ukuba kweli nqanaba solwalamano lwakho.
Ukuba akukho elivisayo, ukuba ngokuqinisekileyo kuba ezinye nobudlelwane yasilela kwipotifoliyo yakho, yaye oku kuhle ngokugqibeleleyo. wonke umntu owenza. Kungakhathaliseki ukuba yintoni na ukuba uthi malunga ex yakho / exes, umhla wokuqala na ixesha elifanelekileyo lokuba incoko enjalo. Waye yena bitch elawulayo? Wa ye komore iyonke? Oku asiyonto ufuna ukuxelela umntu ukuba nje wadibana njengoko / usenokucinga ukuba ayikho enye into kodwa umphefumlo ukrakra. Ukuba kwelinye icala, ukuba amagama amakhulu kuphela ukuba nithi ngawo, nawe usenokuziva bacinge ungafumani phezu kwabo, kwaye wena awunayo, ngoko ke, ukulungele ukuqalisa omnye ubudlelwane. Ukuba ngomhla wakho uzama ukufumanisa ukuba kutheni nahlukana ex yakho, ukunika impendulo engacacanga equlathe akukho singabangcikivi okanye simzukise.
Lwakho lwangaphambili engahlambulukileyo kangaka
SokuHayibhaneyitha okanye dirtier, sonke elidlulileyo, kwaye oku akuthethi thina unelungelo ukufumana uthando. nokuba, oku akuthethi ukuba kufuneka ukuba siqhayise misshapes zakho elidlulileyo ngosuku lwakho lokuqala. Kuya kufuneka ukuba kuza kuhlambuluka ezinye zezo zinto ubuncinane ngexesha elithile kwi nisaqala solwalamano lwakho, kodwa akunyanzelekanga ukuba ukoyikisa umhla bakho kude ngexesha yokuqala udibana.
iwotshi yakho zebhayoloji
Njengoko ixesha lihamba, ingakumbi abasetyhini, kodwa abantu baqalise ukuva iwotshi sebhayoloji ngokuphawula. Umelwe kwelo phakade apho ufuna ukuqala nosapho kwaye ukuba abantwana, kodwa kuyacetyiswa ukuba kuqala ukufumana liqabane elifanelekileyo. Musa ukubeka inqwelo phambi ihashe!
isikhundla owuthandayo ngesondo
Kungakhathaliseki ukuba yintoni ajike kuwe yaye oko kuvuyela ukwenza ebhedini, akuqali into yokuqala ufuna umhla wakho ukufumanisa malunga nawe. Ngokufanayo, oku eyona nto ibalulekileyo ofuna ukuyazi malunga nokuba iqabane. Linda de kufikelelwe kwinqanaba lasekunene obusondeleyo ukuthetha ngezi zinto.